GEM : “Sarotra ny fanarenana ny sehatry ny fizahan-tany noho ny covid-19”
Tafiditra ao anatin’ny fanarenana ny toekarena potiky ny covid-19 ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana. 9 décembre 2021
Manoloana izay, nitondra ny fomba fijeriny ny teo anivon’ny vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny Gem. Nambaran’izy ireo fa nahakasika ny toekarena amin’ny ankapobeny teto amin’ny Firenena ny covid-19 noho izy niverimberina ary mbola ahiana hiverina amin’izao fotoana noho ireo “variant” hafa hita any amin’ny Firenena maromaro aty Afrika.
Ny sehatry ny fizahan-tany no tena nasian’izy ireo tsindrim-peo fa : “Mbola sarotra ny hanohizana azy”. Noho ity covid-19 ity, voafetra ihany ny fahafahan’i Madagasikara manokatra ny sisin-taniny. “Io efa hita mivantana io ny fiantraikan’ny covid-19 teo amin’ny sehatry ny fizahan-tany. Tsy mbola tafarina izany hatramin’izao kanefa mbola mampanahy ny hoaviny ato ho ato. Misy foana ny covid ary telo na efatra taona eo isika mbola hiatrika izany. Mila mametraka paikady hentitra hiatrehana izany i Madagasikara kanefa mbola ady hevitra io”, hoy i Thierry Rajaona, filohan’ny Gem.
Haba sy hetra
Nasian’ny vondron’ny mpandraharaha eto Madagasikara (Gem) resaka ihany koa ny mahakasika ny Tetibola 2022, vao nolaniana teny amin’ny parlemanta roa, ny herinandro lasa teo. Araka ny fomba fijerin’izy ireo, ny fampihenana ny tahan-ketra alaina amin’ireo “zone franche” miasa eto no tokony himasoan’ny Fanjakana aloha amin’izao ankatoky ny covid-19 izao. “Tsy mbola zakan’ny mpampiasa vola ny fandoavana hetra ambony, raha ny zava-misy amin’izao no jerena. Mety hisy akony eo amin’ny fampihodinana ny orinasany izany. Avelao aloha ry zareo hamorona asa dia aoriana, rehefa lasa ny covid-19 hiadian-kevitra indray ny mahakasika ny fakana hetra”, hoy hatrany ny Gem. Marihina fa anisan’ny voalohany nantsoin’ny Fanjakana tamin’ity taona 2021 ity ny sehatra tsy miankina ary tonga nanatrika izany foana ny Gem.